अस्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा छाएका कानुन... :: हेमन्त काफ्ले :: Setopati
अस्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा छाएका कानुन व्यवसायी शम्सेरसिंह
अस्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा उनलाई नचिन्ने सायदै कमै होलान्, उनको नाम र कामले सबैले चिन्छन्।
कानुन व्यवसायी शम्सेरसिंह थापा।
नेपाली समाजको सदभाव र अस्तित्वको सवालमा उनको परिचय महत्वपूर्ण रहेको छ। वेर्स्टन सिड्नी विश्वविद्यालयबाट कानुनमा विद्यावारिधि गरेका थापा यतिखेर सिड्नीमा शम्सेर थापा एन्ड एशोसियट्स नामका कानुनी परामर्श केन्द्र खोलेर सबैको मनमा बसेका छन्।
देखेको कुरा बोल्ने अनि समाजका कमीकमजोरी औंल्याउने विषयमा उनी पछि पर्दैनन्।
विद्यार्थीका सवालमा होस् या एनआरएन वा परामर्श उनको स्पष्ट धारणा हुन्छ। आफ्नो दृढ सोचले गर्दा कतिले उनलाई घमण्डीको संज्ञा पनि दिन्छन्।
प्रवासी समाज अस्ट्रेलियामा यतिबेला थुप्रै नेपाली शान र मानको जागिरमा रमेका छन्। मृत मुटु फेरेर चिकित्सा विज्ञानमा चमत्कार गरेका कुमुद धिताल हुन् या शेष घले सबैका आआफ्ना क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चामा छन्।
यिनै नेपाली व्यवसायीको भिडमा पहिलो नेपाली वकिलका रूपमा शम्सेरसिंह थापाले कानुनी क्षेत्रमा पनि वाहवाही कमाएका छन्।
उनको पहिलो प्राथमिकता भनेको नेपाल र नेपालीनै हो।
विदेशमा फरक खाले कानुन अभ्यासमा अभ्यस्त भैनसकेका नेपालीलाई परेका पीर मर्कामा मल्हम लगाउने अभिप्रायमा सफल भएका छन् थापा। नजानेका कारण अनि परिबन्धमा परेका र विद्यार्थीका लागि थापा सदैव सेवा गर्न अगाडि तम्सिन्छन्।
उनको भनाइ छ, ‘विदेशमा कतिपय गल्ती नजानेर पनि गरिन्छ त्यस्तालाई सेवा गर्नु धर्म पनि हो। न्यु साउथ वेल्स ल सोसाइटी ले २००५ / २००६ मा पिछडिएका वर्ग (Certificate of Disadvantaged Group) मुख्यतया नेपालीलाई नि:शुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरे बापत ‘Certificate of Appreciation’ प्रदान गरेर थापालाई सम्मानित समेत गरेका थियो।
नेपालमा कानुनका विद्यार्थीका रूपमा शम्सेरसिंह थापाले सन् १९९१ मा ल क्याम्पसबाट स्नातक सकेर अधिवक्ताको रूपमा पाइला अगाडि बढाएका थिए। तर नेपालको कानुनी व्यवस्था र प्रभावका बारेमा उनी सधैं चिन्तित हुन्थे। कतिपय विषय वस्तु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा नेपाली कानुन व्यवसायीहरूको पहुँच पुग्न नसकेको विषयमा उनी गम्भीर थिए।
पढाइ सकेर उनले केही समय अधिवक्ताका रूपमा अनुभव संगाले र बाल संगठनमा कानुनी सल्लाहकार साथै लिगल एडजस्ता परियोजनामा पनि उनले कम गर्न थाले।
रेडियो नेपालमा बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै नेपाल टेलिभिजनमा स्व. इन्द्र लोहनीसँग ‘ऐन कानुन’ नामक कार्यक्रममा समेत साथ दिन्थे।
कामसँगै उनको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्ने र अध्ययन गर्ने सोच यथावत नै थियो।
थाइ एयरलाइन्स र पिआइएको दुर्घटनापश्चात पीडितको तर्फबाट काम गर्दा नेपालले विदेशी वकिल झिकाउनु परेको थियो। यो घटनापछि उनलाई झन् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्नै पर्ने भान भयो।
नेपालमा त्यतिबेला कानुनमा स्नातकोत्तर गर्ने प्रावधान थिएन उनले अमेरिका वा भारतमा पढ्ने सोच बनाए, केही महिना उतै गए पनि। तर फेरि नेपाल फर्केपछि उनलाई पुराना साथी विमल भट्टराईले अस्ट्रेलिया जान प्रेरित गरे, अस्ट्रेलियाको कानुनी राज्य अनि यसको महत्वले केही हदसम्म प्रभाव पार्यो उनी उच्च अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आइपुगे।
अस्ट्रेलिया आएर कानुनको विद्यार्थी बन्दै गर्दा यहाँको कानुन र अदालती प्रकृयाको विषयमा उनको संलग्नता १९९६ देखि बढ्दै गयो।
सन् १९९७ मा उनले एलएलएम सके।
त्यसपश्चात विश्वविद्यालयले विद्यावारिधिको लागि प्रस्ताव गर्‍यो।
कानुन व्यवसायलाई निरन्तरता दिने कि विद्यावारिधि गर्ने ? उनी द्विविधामा परे।
पढाइसँगै अनुभव साट्दै ल फर्ममा काम गरिरहेका थापाले सन् २००० मा स्थायी बसोबास लिएपछि ‘थापा लिगल रिसर्च सर्विसेज नामक फर्म’ सिड्नी सिटीमा खोले।
जतिबेला नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा पढाइ र कमाइमै व्यस्त थिए, त्यतिबेला व्यवसायिकताको ढोका खोलेर नयाँ आयाम कायम गरे। उनको त्यो कामलाई सबैले प्रोत्साहन गरे।
समय र गतिसँगै बढ्दो नेपाली समाजमा कानुनको परामर्श आफैंमा महत्वको विषय बनेको थियो।
काममा एकपछि अर्को गरी सफलता मिलेपछि पारामाटामा ‘शम्सेर थापा एन्ड एसोसियट्स’ नामको कानुनी परामर्श केन्द्र खोलेर थापाले कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्।
कानुनसँगै उनको व्यवसायले जोडिएका अध्यागमनको समेत काम हेर्ने गर्दछ। उनका करिब आधा दर्जन सहयोगी यस कार्यमा लागेका छन्।
व्यवसायसँगै नेपाली समाज र यसको कर्ममा पनि उनको रुची र सेवा भाव हेर्न लायक रहेको छ।
श्रीमतीको साथमा शम्सेरसिंह थापा
दीनदु:खीलाई सहयोग र निमुखालाई न्याय दिनु यिनको महत्वको विषयभित्र पर्दछ। पैसाभन्दा पनि पेशामा इमान्दारिता र व्यवसायमा निष्ठा यिनको प्रमुखताभित्र पर्दछ।
उनका नेपाली समाजभित्रका कैयौं खाले मुद्दाहरू आउने गर्छन्। घर झगडा र पारपाचुके जस्ता कैयौं मुद्दाहरूमा उनी आफैं न्यायमूर्ति बनिदिन्छन् कतिपय सवालमा।
आपसी मतभेद र सानातिना कमजोरीमा परिवार बिग्रन हुन्न भन्ने उनको मान्यताले कैयौं नेपालीको जोडी टुटनबाट बचेको उदाहरणहरू प्रसस्तै छन्।
नेपालीको संख्या बढेसँगै पारिवारिक समस्या बढेको र आफूले प्राय: दिनैपिच्छे सम्झाउने, बुझाउने काम गर्नु परेकोले कहिलेकाहीँ उनी ‘पारिवारिक परामर्शदाता’ भएको महशुस गर्दछन् न कि वकिल।
उनको शरणार्थीका मुद्दामा समेत विशेष दख्खल र अध्ययन भएकाले कैयौं महत्वपूर्ण बहसमा उनले जित्दै गर्दा यहाँको कानुनी फैसलामा नयाँ नजीर समेत बनेका छन्।
अस्ट्रेलियाका पहिलो नेपाली वकिलका रूपमा समेत परिचय बनाएका शम्सेर सिंह थापाको आफ्नै खाले सिद्धान्त र सोच छ, उनी धर्मको परिभाषा यसरी दिन्छन्, ‘मन्दिर जानुभन्दा पहिले दीनदु:खीको सेवा गर्नुस्,तपाईंले गरेको कर्मले आफैं धर्म कमाउँछ।’
फुर्सदको समय ब्याडमिन्टनमा रमाउने यी वकिल स्याङ्जामा जन्मिएर काठमाडौंमा हुर्के पनि दोहोरी गीत र लोक संगीतका सौखिन छन्। त्यसैले भन्छन्, ‘मानिसले आफ्नो मौलिकता छोड्यो भने पराइ भइहाल्छ नी।’
श्रीमती सिल्भिया थापा, छोरा गौरव अनि छोरी गरिमाका साथ उनी सिड्नीमा बस्दै आएका छन्।
‘जन्मभूमिको माया मुटुमा साँचेर कर्मथलोको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ’,विदेशप्रतिको उनको सोच यस्तो छ।
पैसाभन्दा पनि पेशामा इमानदार भइदिने हो भने रातभर आरामसँग निन्द्रा लाग्ने उनको बुझाइ छ।
‘मैले नाम, दाम अनि आत्मसम्मान पाएको छु, यदि तपाईं पेशामा इमानदार बन्ने हो भने यी सबै कुरा पाउन सकिन्छ’, थापाले सेतोपाटीसँग भने,‘लोभी/पापीको लालसाले मानिसले पैसा त कमाउलान्, तर रातभर आरामसँग सुत्न सक्दैनन्, मेरो जीवनको सिकाइ र भोगाइ यति नै हो।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १८, २०७६, १४:०१:००